ခတျေသမီးပြို – My Blog
“ ဘာစာအုပျတှေ ဖတျနတောလဲကှ ” ဝတ်ထုစာအုပျဖတျနတော” မငျးကှာ အရညျမရအဖတျမရဝတ်ထုတှေ ဖတျနရေတယျလို့” “ကြ နျောပငျြးလို့ပါ” အေးပငျြးနရေငျ အနှဈသာရရှိတဲ့ စာအုပျတှဖေတျပေါ့”့ျ ဦးလေးပေးသညျမှာတရားစာအုပျဖွဈသညျ။ ဦးလေးက ရနျကုနျအရှပေို့ငျးတက်ကသိုလျက.. ကထိက၊ ကနြျောက သူ့တူ ကနြျောဆယျတနျး အောငျပွီးကာစ။ သူက ပငျစငျယူပွီးရငျဘုနျ ကွီးဝတျပွီး တရားအားထုတျမယျတဲ့။ ကနြျောကိုလညျး သူ့လိုလူပြိုကွီးဖွဈစခေငျြတာ။ ကနြျောဗြာ အခုဖိုငျနယျရောကျပွီ၊ သူ့ကို ကွောကျလို့ ရညျးစားမထားရဲဘူး။ ကနြျောလညျး ညဈညဈနှငျ့ ကြောငျးဘကျထှကျလာခဲ့တယျ။ ကားပျေါကဆငျးတော့ ကောငျမလေးတဈယောကျကို သှားတိုကျမိတယျ၊၊ သူ့လကျထဲက စာအုပျတှပွေုတျကသြှားတော့ တောငျးပနျပွီး ပွနျကောကျ ပေးလိုကျတယျ ကောငျမလေးကို သခြောကွညျ့လိုကျမှ Wow !အရမျးမိုကျတယျ။ အရပျရှညျရှညျ အသားက ဖွူဖှေးလို့၊ ဇငျ ယျောတောငျမကျြခုံးတနျးလေး၊ သှားလေးတှကေ ညီညီညာညာ၊ နှငျးဆီဖူးလေးလို နှုတျခမျးက ကနြေျာ့ရငျထဲ ရခေဲမွဈစီးဆငျးသှား တယျ။ တဈညလုံး ကောငျမလေးမကျြနှာကိုပဲ မွငျယောငျမိတယျ တဈကြောငျးထဲတကျတာဆိုတော့ ခဏ ခဏ ပွနျတှဖွေ့ဈကွ တယျ။ သူငယျခငျြးတှေ မွှောကျပေးမှုရဲ့အောကျမှာ ရီးစားတှဖွေဈသှားကွတယျ။
ကြှနျတေျာ့ခဈြသူနာမညျက မိုး။ ကြောငျးမှာဆရာလုပျနတေဲ့ ဦးလေးလညျးသိသှားပွီး ဆူတယျ။တားတယျ။ မရတော့ တမြိုးထှငျ ပွနျတယျ “ရော့..ဟကေ့ောငျ ကွညျ့” “ဟ..မိုးပုံပါလားလှသားပဲ” “နောကျကဟာကိုကွညျ့ပါအုံး” “ဒါကွီးကဘာလဲ၊ ရစေီးကွောငျးတှလေို ပတျကွားအကျတှေ “အဲဒါမငျးကောငျမလေး နှုတျခမျးလေ” “ဗြာ…းးးးးး ဒီတောငျးကုနျးတှနှေငျ့ ဒီခြိုငျ့ခှကျ ကဘာလဲဗြ” “အဲဒါမငျးကောငျမလေးရဲ့ မကျြနှာက မှေးညှငျးပေါကျတှလေကေို အကယျြခြဲ့ပေးထားတာ။ “ဗြာ… ဒီတှငျးနကျကွီး ကရော “အဲဒါ မငျးကောငျးမလေးနှာခေါငျးပေါ့ ကြှနျတျောစိတျလသှေားတယျဗြ။ဦးလေးရဲ့တရားခမြှု ဓာတျပုံတှမွေငျပွီးတော့ ကြှနျ တေျာ့ခဈြသူကိုမွငျတဲ့အခါတိုငျး အပုပျကောငျလို့သာမွငျနရေော။ မိုးက မေးတော့ ကြှနျတျောလညျး အမှနျအတိုငျးပွောပွလိုကျ တယျ။ မိုးတခကျြစဉျးစားလိုကျပွီး “ကဲမောငျ..မောငျ့ကိုပွစရာရှိတယျ၊ မိုးနှငျ့လိုကျခဲ့” “သှားလေ” မိုးက ကားငှားပွီး ကြှနျတေျာ့ ကို ဟိုတယျချေါတာဗြ။ ဟိုတယျအခနျးထဲရောကျတော့လညျး ကြှနျတေျာ့ကိုထိုငျခိုငျးထားပွီး မိုးက ရခြေိုးခနျးထဲဝငျသှားတယျ။
“မောငျ” “ဘာလဲမိုး” “ မိုးကိုကွညျ့ပါမောငျ၊ မိုးမလှဘူးလား” “လှတာပေါ့ မိုးရယျ မိုးအပျေါအင်ျကြီခြှတျလိုကျတယျ။ ဖွူဖှေးတဲ့ အသားနှငျ့ လိုကျဖကျတဲ့ နို့အုံက ဘျောလီအပျေါဘကျရုနျးကနျနသေလိုပါ။ ကွညျ့ရငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးကတောငျလာတယျ။ မိုးက ဘျောလီကိုခြှတျလိုကျတယျ။ “မိုး နို့ကွီးတှေ မလှဘူးလား မောငျ လုံးဝနျးပွီးလှပတဲ့ နို့အုံပနျးရောငျသနျးပွီး စုခြှနျတဲ့နိုးသီးခေါငျး လေး၊လှလိုကျတာဗြာ “လှတယျ.မိုးရယျ။ မငျးးးး သိပျလှတာပဲ.မိုး” မိုးက စကပျလေးကို ခြှတျခလြိုကျတယျ။ ပငျတီပနျးရောငျ လေးပျေါလာတယျ၊ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးနရောကွီးကိုကွညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့မှာ အာခေါငျတောငျ ခွောကျနရေပွီ “မောငျးးး မိုးးးး လှလားဟငျ” “အရမျးးးလှတယျ” မိုးက ပငျတီပါဆှဲခြှတျပွီး ဖငျလေးကုနျးပွတယျ အလှနတျသမီးလေးတပါး ကြှနျတေျာ့ ရှကေို့ ရောကျနသေလားဆိုပွီး ကြှနျတျောငေးနမေိတယျ။ မိုးက ခန်ဓာကိုယျကိုတပတျလှညျ့လိုကျပွတယျ ဖှငျ့ထှားတဲ့တငျ သေး သောခါးနှငျ့ လုံးဝနျးတဲ့နို့ အပွဈဆိုစရာမရှိအောငျ လှပလှနျးတယျ၊ စောကျခုံးလေးပျေါမှာ အမှေးပါးနှငျ့မို့မောကျနတေဲ့အဖုတျ။ ကြှနျတေျာ့ လီးကတောငျလှနျးလို့ ဂှေးပါအောငျ့လာတယျ။ မိုးက ပေါငျနှဈလုံးကိုကားပွလိုကျတဲ့တော့ ပနျးရောငျစအိုနှငျ့အဖုတျပွူး ပွူးလေး “ကဲမောငျ.မောငျ့မကျြလုံးက မောငျ့ဦးလေးပွတဲ့ ဓာတျပုံတှလေို ခြဲ့ကွညျ့လို့ရလား”
ဟငျ့အငျးးး “မောငျရယျ ပုံမှနျလေးပဲ မွငျရတာကို မောငျကဘယျလိုဖွဈနတောပဲ” မိုးပွောတာမှနျသညျ။ မိုးကလှလှနျးသညျ။ မိုး ရဲ့ အလှတရားတှေ မွငျပွီးနောကျ ဦးလေးပွထားသောတရားမြား ပြောကျကုနျပွီ။ မိုးကကြှနျတေျာ့ အနားကိုကပျပွီး စကားပွော တော့ မိုးရဲ့ခါးသှယျသှယျလေးကို ဖကျပွီး နှုတျခမျးလေးကို ငုံစုပျပဈလိုကျတယျ။ မိုးကလညျး ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျနမျးတယျ။ နှဈ ယောကျစလုံး ဖီးတှတေကျလာတော့ မိုးကို ကုတငျပျေါ လဲခလြိုကျပွီး မိုးရဲ့နို့ကို မှေးကွူပွီး စို့ပဈလိုကျယျ။ နို့စို့ရငျး မိုးရဲ့ စောကျစိ လေးကိုပါ ပှတျပေးလိုကျတယျ။ နို့သီးလေးတှကေို တဖကျ့စီ ပွောငျးစို့ပေးပျွီး နို့အုံကွီးတှကေိုလြှာနှငျ့ ယကျလိုကျတော့ မိုးမှာ တဟငျးဟငျး ညညျးသံထှကျလာတယျ။ “ပွှတျ…ပွှတျ..ပွှတျ” “အာ့..အငျ့ဟငျးးဟငျးးမောငျရယျ” “ပွှတျ..ပလပျ..လပျ..” “မောငျရယျ..မိုးမနတေတျတော့ဘူး” မို့ဖောငျးပွီး နှုတျခမျးသားထူပွီး အရှတျသေးသေးလေးနှငျ့ ပနျးရောငျပွေးနသေော အဖုတျကို ရှူမငွီးသောအကွညျ့ဖွငျ့ ကွညျ့ပွီးနောကျ လြှာကိုအပွားလိုကျလုပျကာ အကှဲကွောငျးတလြောကျ ယကျပဈလိုကျတယျ။
“ရှလှတျ. ပလပျ” “အားးရှီးးမောငျ..အားး” အဖုတျထဲမှအရညျတဈခြို့ ကြှနျတေျာ့ပါးစပျထဲ ဝငျသှားတယျ။ ပွီးတော့မှ အဖုတျ နှုတျခမျးသားဖွဲပွီး လြှာကိုစုခြှနျပွီး အဖုတျအကှဲကွောငျးတလြောကျ ယကျလိုကျတယျ။ “ပလပျ..ပလပျ” “အိုး..အငျ့..ဟငျ့..” မိုးက တှနျလိမျလို့ပေါ့။ ညညျးသံပေါငျးစုံနဲ့ ညညျးပွီး အိပျရာခငျးကို စုတျပွဲမတကျ ဆှဲထားတာ “ပွှတျ..ပွှတျ..ပွှတျ” “အားးးးးမောငျရ ယျအားးး” မိုးရဲ့ စောကျစိလေးကို ကိုကျပွီး ခပျပွငျးပွငျးလေး စုပျယူလိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့ခေါငျးကို သူ့စောကျဖုတျဆီ အတငျးဆှဲ ကပျလိုကျတယျ။ အသကျရှုကွပျပမေယျ ကြှနျတျော ဆကျယကျပေးနတေော့ တဆတျဆတျတုနျပွီး မို့းပွီးသှားသညျ။ စိတျကနြေပျ မှု အပွညျ့အဝရပွီး မိုးစောကျဖုတျလေးထဲက အရညျတှေ အပွငျဘကျကို စိမျ့ပွီး တလှိမျခငျြးထှကျလာတယျ မိုးက အိပျရာကထ လာပွီး ကွမျးပျေါ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျပွီး ကြှနျတေျာ့လီးကို ဂြာတော့တာပဲ ဒီတဈခါအျောရတာ ကြှနျတျောပေါ့ မိုးက လီးစုပျမ ကြှမျးကငျြသျောလညျး ထိရောကျမှုက ပွငျးထနျပသေညျ။
လီးက အလှနျအမငျးတောငျတော့ လီးဒဈက ကားထှကျလာတော့ပွီးခငြိသလို ဖွဈလာလို့ မိုးကို ရပျခိုငျးလိုကျရတယျ မိုးပေါငျကွား ဝငျပွီး လီးကိုး မိုးရဲ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးထဲ ထိုးထညျ့လိုကျတယျ တငျးကပျြပွီး လီးက စောကျဖုတျထဲ နှဈလကျမခနျ့ဝငျ သှားတယျ“ဗဈြ..ဗဈြ.ဗဈြ” “အငျ့..အငျ့ဟငျ့ဟငျ့.မောငျရယျ၊ဖွေးဖွေးနှျော” လီးထိပျက တငျးကနဲဖွဈသှားတော့ ထပျပွီးရှကေို့ အားစိုကျပွီးသှငျးလိုကျတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ..ဖောကျ” “အာ့..မောငျ” “နာသှားလာမိုး” “နညျးနညျးတော့ နာတယျမောငျ” မိုး အနာ သကျသာအောငျ စောကျဖုတျထဲ လီးထိုးထညျ့တာရပျလိုကျပွီး နို့စို့ပေးလိုကျတယျ “ပွှတျ..ပွှတျ.ပွှတျ” “ဟငျးးအငျးးအငျးးး” “အငျ့..ဟငျးးးဟငျးးးးး” မိုးသကျသာပွီးအျောညညျးသံတှထှေကျတော့ မငျးမငျးက လီးကိုအဆုံးထိထိုးသှငျးရငျး လိုးလိုကျတော့ တယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ..ဘှတျ..ဘှတျဖတျ..ဖတျ” အာ့အငျ့ဟငျးးးဟငျးးး” “ဗွိ..ဗြိ..ဖဈြ..ဖဈြ..ဘှတျဖတျ..ဖတျ..ဖတျ” အား..အငျ့ ကောငျးလာပွီမောငျ” “အငျ့ဟငျးးးဟငျးးးးးအာ့..ရှီးးရှီးး” ဆယျငါးမိနဈလောကျ မနားတမျးလိုးလိုကျတော့ ကြှနျတျောလညျးလညျး ပွီးခငျြလာသလို မိုးကတော့ အျောညညျးပွီးပွီးသှားတယျ။
“အာ့..ရှီးးရှီးးအားပွီးပွီမောငျ.အာ့မိုးပွီးပွီ” မမိုးပီးသှားတော့ အခကျြငါးဆယျလောကျ မနားတမျးဆောငျ့လိုးလိုကျတော့ ကြှနျတျော လညျး ပီးတယျ။ လရညျတှတေော့ မိုးစောကျခေါငျးထဲ ပမျးပဈလိုကျတယျ အဲယားကှနျးခနျးထဲမှာ အမောဖွပွေီး မိုးစောကျဖုတျ လေးကို နောကျတကွိမျလိုးဖို့ ဆှပေးနလေိုကျတယျ။ ဒီခါကတြော့ မိုးက အပျေါက တကျဆောငျ့ပေးတယျ။ မိုးညောငျးတော့ ကြှနျတျောက အပျေါက ပွနျတကျလိုးပေါ့ ပွီးခါနီးကမြှ မိုးကို ကုနျးခိုငျးပွီး မိုးတငျပါးကွီး ကိုငျဆောငျ့လိုးပွီးမှ မိုးစောကျခေါငျးထဲ လရညျတှေ ပမျးထညျ့လိုကျတယျ နောကျရကျကတြော့ ကြှနျတျောနဲ့မိုး ခိုးပွေးခဲ့ကွတယျ။ ဦးလေးကိုတော့ စာရေးထာခဲ့တယျ။ လိုးရတာဘယျလောကျအရသာရှိကွောငျး မိုးကိုမလိုးပဲ မနနေိုငျတော့ကွောငျးပေါ့။ ငှလေညျးအလုံအလောကျပါတာမို့ ခြောငျးသာ ဟိုတယျခနျးထဲမှာယအပွငျကိုလုံးဝမထှကျဘဲ တဈလလုံး လိုးနကွေတော့တာ။ အစားလာပို့တဲ့ အခြိနျလေးပဲ အလိုးရပျကွတာဗြ
“ ဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်နေတာလဲကွ ” ဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်နေတာ” မင်းကွာ အရည်မရအဖတ်မရဝတ္ထုတွေ ဖတ်နေရတယ်လို့” “ကျ နော်ပျင်းလို့ပါ” အေးပျင်းနေရင် အနှစ်သာရရှိတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပေါ့”့် ဦးလေးပေးသည်မှာတရားစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဦးလေးက ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်က.. ကထိက၊ ကျနော်က သူ့တူ ကျနော်ဆယ်တန်း အောင်ပြီးကာစ။ သူက ပင်စင်ယူပြီးရင်ဘုန် ကြီးဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်မယ်တဲ့။ ကျနော်ကိုလည်း သူ့လိုလူပျိုကြီးဖြစ်စေချင်တာ။ ကျနော်ဗျာ အခုဖိုင်နယ်ရောက်ပြီ၊ သူ့ကို ကြောက်လို့ ရည်းစားမထားရဲဘူး။ ကျနော်လည်း ညစ်ညစ်နှင့် ကျောင်းဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သွားတိုက်မိတယ်၊၊ သူ့လက်ထဲက စာအုပ်တွေပြုတ်ကျသွားတော့ တောင်းပန်ပြီး ပြန်ကောက် ပေးလိုက်တယ် ကောင်မလေးကို သေချာကြည့်လိုက်မှ Wow !အရမ်းမိုက်တယ်။ အရပ်ရှည်ရှည် အသားက ဖြူဖွေးလို့၊ ဇင် ယော်တောင်မျက်ခုံးတန်းလေး၊ သွားလေးတွေက ညီညီညာညာ၊ နှင်းဆီဖူးလေးလို နှုတ်ခမ်းက ကျနော့်ရင်ထဲ ရေခဲမြစ်စီးဆင်းသွား တယ်။ တစ်ညလုံး ကောင်မလေးမျက်နှာကိုပဲ မြင်ယောင်မိတယ် တစ်ကျောင်းထဲတက်တာဆိုတော့ ခဏ ခဏ ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြ တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ မြှောက်ပေးမှုရဲ့အောက်မှာ ရီးစားတွေဖြစ်သွားကြတယ်။
ကျွန်တော့်ချစ်သူနာမည်က မိုး။ ကျောင်းမှာဆရာလုပ်နေတဲ့ ဦးလေးလည်းသိသွားပြီး ဆူတယ်။တားတယ်။ မရတော့ တမျိုးထွင် ပြန်တယ် “ရော့..ဟေ့ကောင် ကြည့်” “ဟ..မိုးပုံပါလားလှသားပဲ” “နောက်ကဟာကိုကြည့်ပါအုံး” “ဒါကြီးကဘာလဲ၊ ရေစီးကြောင်းတွေလို ပတ်ကြားအက်တွေ “အဲဒါမင်းကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းလေ” “ဗျာ…းးးးးး ဒီတောင်းကုန်းတွေနှင့် ဒီချိုင့်ခွက် ကဘာလဲဗျ” “အဲဒါမင်းကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာက မွေးညှင်းပေါက်တွေလေကို အကျယ်ချဲ့ပေးထားတာ။ “ဗျာ… ဒီတွင်းနက်ကြီး ကရော “အဲဒါ မင်းကောင်းမလေးနှာခေါင်းပေါ့ ကျွန်တော်စိတ်လေသွားတယ်ဗျ။ဦးလေးရဲ့တရားချမှု ဓာတ်ပုံတွေမြင်ပြီးတော့ ကျွန် တော့်ချစ်သူကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်း အပုပ်ကောင်လို့သာမြင်နေရော။ မိုးက မေးတော့ ကျွန်တော်လည်း အမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက် တယ်။ မိုးတချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ကဲမောင်..မောင့်ကိုပြစရာရှိတယ်၊ မိုးနှင့်လိုက်ခဲ့” “သွားလေ” မိုးက ကားငှားပြီး ကျွန်တော့် ကို ဟိုတယ်ခေါ်တာဗျ။ ဟိုတယ်အခန်းထဲရောက်တော့လည်း ကျွန်တော့်ကိုထိုင်ခိုင်းထားပြီး မိုးက ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ်။
“မောင်” “ဘာလဲမိုး” “ မိုးကိုကြည့်ပါမောင်၊ မိုးမလှဘူးလား” “လှတာပေါ့ မိုးရယ် မိုးအပေါ်အင်္ကျီချွတ်လိုက်တယ်။ ဖြူဖွေးတဲ့ အသားနှင့် လိုက်ဖက်တဲ့ နို့အုံက ဘော်လီအပေါ်ဘက်ရုန်းကန်နေသလိုပါ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကတောင်လာတယ်။ မိုးက ဘော်လီကိုချွတ်လိုက်တယ်။ “မိုး နို့ကြီးတွေ မလှဘူးလား မောင် လုံးဝန်းပြီးလှပတဲ့ နို့အုံပန်းရောင်သန်းပြီး စုချွန်တဲ့နိုးသီးခေါင်း လေး၊လှလိုက်တာဗျာ “လှတယ်.မိုးရယ်။ မင်းးးး သိပ်လှတာပဲ.မိုး” မိုးက စကပ်လေးကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။ ပင်တီပန်းရောင် လေးပေါ်လာတယ်၊ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းနေရာကြီးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ အာခေါင်တောင် ခြောက်နေရပြီ “မောင်းးး မိုးးးး လှလားဟင်” “အရမ်းးးလှတယ်” မိုးက ပင်တီပါဆွဲချွတ်ပြီး ဖင်လေးကုန်းပြတယ် အလှနတ်သမီးလေးတပါး ကျွန်တော့် ရှေ့ကို ရောက်နေသလားဆိုပြီး ကျွန်တော်ငေးနေမိတယ်။ မိုးက ခန္ဓာကိုယ်ကိုတပတ်လှည့်လိုက်ပြတယ် ဖွင့်ထွားတဲ့တင် သေး သောခါးနှင့် လုံးဝန်းတဲ့နို့ အပြစ်ဆိုစရာမရှိအောင် လှပလွန်းတယ်၊ စောက်ခုံးလေးပေါ်မှာ အမွေးပါးနှင့်မို့မောက်နေတဲ့အဖုတ်။ ကျွန်တော့် လီးကတောင်လွန်းလို့ ဂွေးပါအောင့်လာတယ်။ မိုးက ပေါင်နှစ်လုံးကိုကားပြလိုက်တဲ့တော့ ပန်းရောင်စအိုနှင့်အဖုတ်ပြူး ပြူးလေး “ကဲမောင်.မောင့်မျက်လုံးက မောင့်ဦးလေးပြတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလို ချဲ့ကြည့်လို့ရလား”
ဟင့်အင်းးး “မောင်ရယ် ပုံမှန်လေးပဲ မြင်ရတာကို မောင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတာပဲ” မိုးပြောတာမှန်သည်။ မိုးကလှလွန်းသည်။ မိုး ရဲ့ အလှတရားတွေ မြင်ပြီးနောက် ဦးလေးပြထားသောတရားများ ပျောက်ကုန်ပြီ။ မိုးကကျွန်တော့် အနားကိုကပ်ပြီး စကားပြော တော့ မိုးရဲ့ခါးသွယ်သွယ်လေးကို ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မိုးကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်နမ်းတယ်။ နှစ် ယောက်စလုံး ဖီးတွေတက်လာတော့ မိုးကို ကုတင်ပေါ် လဲချလိုက်ပြီး မိုးရဲ့နို့ကို မွေးကြူပြီး စို့ပစ်လိုက်ယ်။ နို့စို့ရင်း မိုးရဲ့ စောက်စိ လေးကိုပါ ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နို့သီးလေးတွေကို တဖက့်စီ ပြောင်းစို့ပေးပြီ်း နို့အုံကြီးတွေကိုလျှာနှင့် ယက်လိုက်တော့ မိုးမှာ တဟင်းဟင်း ညည်းသံထွက်လာတယ်။ “ပြွတ်…ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့..အင့်ဟင်းးဟင်းးမောင်ရယ်” “ပြွတ်..ပလပ်..လပ်..” “မောင်ရယ်..မိုးမနေတတ်တော့ဘူး” မို့ဖောင်းပြီး နှုတ်ခမ်းသားထူပြီး အရွတ်သေးသေးလေးနှင့် ပန်းရောင်ပြေးနေသော အဖုတ်ကို ရှူမငြီးသောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်ပြီးနောက် လျှာကိုအပြားလိုက်လုပ်ကာ အကွဲကြောင်းတလျောက် ယက်ပစ်လိုက်တယ်။
“ရှလွတ်. ပလပ်” “အားးရှီးးမောင်..အားး” အဖုတ်ထဲမှအရည်တစ်ချို့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ ပြီးတော့မှ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားဖြဲပြီး လျှာကိုစုချွန်ပြီး အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် ယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ်..ပလပ်” “အိုး..အင့်..ဟင့်..” မိုးက တွန်လိမ်လို့ပေါ့။ ညည်းသံပေါင်းစုံနဲ့ ညည်းပြီး အိပ်ရာခင်းကို စုတ်ပြဲမတက် ဆွဲထားတာ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အားးးးးမောင်ရ ယ်အားးး” မိုးရဲ့ စောက်စိလေးကို ကိုက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စုပ်ယူလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို သူ့စောက်ဖုတ်ဆီ အတင်းဆွဲ ကပ်လိုက်တယ်။ အသက်ရှုကြပ်ပေမယ် ကျွန်တော် ဆက်ယက်ပေးနေတော့ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး မို့းပြီးသွားသည်။ စိတ်ကျေနပ် မှု အပြည့်အဝရပြီး မိုးစောက်ဖုတ်လေးထဲက အရည်တွေ အပြင်ဘက်ကို စိမ့်ပြီး တလှိမ်ချင်းထွက်လာတယ် မိုးက အိပ်ရာကထ လာပြီး ကြမ်းပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို ဂျာတော့တာပဲ ဒီတစ်ခါအော်ရတာ ကျွန်တော်ပေါ့ မိုးက လီးစုပ်မ ကျွမ်းကျင်သော်လည်း ထိရောက်မှုက ပြင်းထန်ပေသည်။
လီးက အလွန်အမင်းတောင်တော့ လီးဒစ်က ကားထွက်လာတော့ပြီးချငိသလို ဖြစ်လာလို့ မိုးကို ရပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ် မိုးပေါင်ကြား ဝင်ပြီး လီးကိုး မိုးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ် တင်းကျပ်ပြီး လီးက စောက်ဖုတ်ထဲ နှစ်လက်မခန့်ဝင် သွားတယ်“ဗျစ်..ဗျစ်.ဗျစ်” “အင့်..အင့်ဟင့်ဟင့်.မောင်ရယ်၊ဖြေးဖြေးနှော်” လီးထိပ်က တင်းကနဲဖြစ်သွားတော့ ထပ်ပြီးရှေ့ကို အားစိုက်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဖောက်” “အာ့..မောင်” “နာသွားလာမိုး” “နည်းနည်းတော့ နာတယ်မောင်” မိုး အနာ သက်သာအောင် စောက်ဖုတ်ထဲ လီးထိုးထည့်တာရပ်လိုက်ပြီး နို့စို့ပေးလိုက်တယ် “ပြွတ်..ပြွတ်.ပြွတ်” “ဟင်းးအင်းးအင်းးး” “အင့်..ဟင်းးးဟင်းးးးး” မိုးသက်သာပြီးအော်ညည်းသံတွေထွက်တော့ မင်းမင်းက လီးကိုအဆုံးထိထိုးသွင်းရင်း လိုးလိုက်တော့ တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်ဖတ်..ဖတ်” အာ့အင့်ဟင်းးးဟင်းးး” “ဗြိ..ဗျိ..ဖျစ်..ဖျစ်..ဘွတ်ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” အား..အင့် ကောင်းလာပြီမောင်” “အင့်ဟင်းးးဟင်းးးးးအာ့..ရှီးးရှီးး” ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် မနားတမ်းလိုးလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်းလည်း ပြီးချင်လာသလို မိုးကတော့ အော်ညည်းပြီးပြီးသွားတယ်။
“အာ့..ရှီးးရှီးးအားပြီးပြီမောင်.အာ့မိုးပြီးပြီ” မမိုးပီးသွားတော့ အချက်ငါးဆယ်လောက် မနားတမ်းဆောင့်လိုးလိုက်တော့ ကျွန်တော် လည်း ပီးတယ်။ လရည်တွေတော့ မိုးစောက်ခေါင်းထဲ ပမ်းပစ်လိုက်တယ် အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ အမောဖြေပြီး မိုးစောက်ဖုတ် လေးကို နောက်တကြိမ်လိုးဖို့ ဆွပေးနေလိုက်တယ်။ ဒီခါကျတော့ မိုးက အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးတယ်။ မိုးညောင်းတော့ ကျွန်တော်က အပေါ်က ပြန်တက်လိုးပေါ့ ပြီးခါနီးကျမှ မိုးကို ကုန်းခိုင်းပြီး မိုးတင်ပါးကြီး ကိုင်ဆောင့်လိုးပြီးမှ မိုးစောက်ခေါင်းထဲ လရည်တွေ ပမ်းထည့်လိုက်တယ် နောက်ရက်ကျတော့ ကျွန်တော်နဲ့မိုး ခိုးပြေးခဲ့ကြတယ်။ ဦးလေးကိုတော့ စာရေးထာခဲ့တယ်။ လိုးရတာဘယ်လောက်အရသာရှိကြောင်း မိုးကိုမလိုးပဲ မနေနိုင်တော့ကြောင်းပေါ့။ ငွေလည်းအလုံအလောက်ပါတာမို့ ချောင်းသာ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာယအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ဘဲ တစ်လလုံး လိုးနေကြတော့တာ။ အစားလာပို့တဲ့ အချိန်လေးပဲ အလိုးရပ်ကြတာဗျ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခတျေသမီးပြို